Bilaogy Afghanistana: Mpanao Tononkalo Namoy ny Ainy, Herisetra & Fanafahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Novambra 2017 1:25 GMT
Guftugo (midika hoe fifanakalozan-kevitra), bilaogera Afgana, manoratra momba an'i Nadia Anjoman, poeta novonoin'ny vadiny tao Herat. Maro no nilaza fa fahasarotam-piaro no antony nahatonga ilay lehilahy namono ity tanora poeta ity. Nilaza i Guftugo fa ao anatin'ny fiarahamonina maloka ao Afganistana, mijaly ny lehilahy sy ny vehivavy. Manontany tena ny amin'ny fomba nahafahan'ny vadin'i Nadia nanao heloka toy izany i Guftugo. Angamba mety mahita valiny ao amin'ny bilaogin'i Sanjar avy any Kabul isika:
Niresaka momba an'i Abdul Ali Mezrai izay novonoin'ny Taliban valo taona lasa ihany koa i Guftugo. Filohan'ny antoko Wahdat (“Mitambatra”) i Mezrai. Araka ny filazan'i Guftugo, matoky ny fitoviana eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy i Mezrai. Mihevitra ihany koa izy fa ny rafitra federaly no tsara indrindra amin'ny fitondrana Afghanistana.
Afghanistan Warrior (rohy amin'ny teny Anglisy) indray mampahatsiahy antsika fa andro lehibe ho an'i Afghanistan ny 13 Novambra :